🥇 ukubalwa kwezicelo zomsebenzisi
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 804
Oda ukubalwa kwezicelo zomsebenzisi
Ukubalwa kwezicelo zomsebenzisi kuyinkomba yomsebenzi wamakhasimende ovumela ukuhlaziya ukusebenza komnyango wokuthengisa. Ukuzenzakalela kusiza ekubalweni kwezicelo zomsebenzisi. Abaningi bethu bajwayele ukusebenzisa i-imeyili noma i-Excel nozakwabo njengama-accounting systems. Ngempela, ukubeka idatha engahlungwa kahle futhi ihlelwe kahle iyithuluzi lokuxazulula izinkinga eziyisisekelo elilula. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngokusekela, ukufayila nokusingatha izicelo, i-imeyili ne-Excel akuwona amathuluzi afanele kakhulu. Ngemuva kwakho konke, isibonelo, abavumeli ukuthumela izaziso, kufaka phakathi nge-SMS. Izicelo zokubalwa kwemali ezivela kuhlelo lwabasebenzisi, ngokungafani namathuluzi we-tabular alula kakhulu, zivumela ukusebenzisa izinketho ezahlukahlukene. Hhayi nje ukugcina amarekhodi ezicelo zomsebenzisi kepha futhi nokugcina inqubo yokulungiselela ukunikezwa kwezebhizinisi, ukuqopha iqiniso lokuthengiselana, ukuhlinzeka ukwesekwa kolwazi kwiklayenti, nokusiza emisebenzini yangemva kwenkonzo. Uhlelo lwezicelo zomsebenzisi ezimali ezivela enkampanini yohlelo lwe-USU Software ngumkhiqizo olula futhi oqondakalayo kumsebenzisi. Ekuthuthukisweni, ungabhalisa kalula izicelo ngaphandle kokuchitha isikhathi kuzo, ngoba izicelo zibhaliswa ngokuzenzakalela. Zingathunyelwa ukubhaliswa ngokuzenzakalela nge-imeyili, izithunywa ezisheshayo, isitolo esiku-inthanethi, kuncike ekuhlanganisweni ne-Intanethi. Mayelana nokugcwalisa amadokhumenti, kungenziwa ngemodi ezenzakalelayo, ngokwesibonelo, gcwalisa imininingwane ngokuzenzakalela. Kuhlelo lwe-USU Software, uzothola ilog yezicelo ezivela kumsebenzisi, izihlungi ezahlukahlukene ziyatholakala kuyo ukuze nganoma yisiphi isikhathi, ungathola idatha oyidingayo, lapho, ngokwesibonelo, umsebenzisi elinda impendulo izicelo. Amakhasimende akho ayojabula ngensizakalo. Izingodo ziqukethe ikhadi lezicelo, eliqukethe imininingwane mayelana nomsebenzisi nezicelo. Ikhadi lezicelo nalo libukeka lilula futhi liqondile. Ukulawulwa kwezimali kubaluleke kakhulu ekuphathweni kwamathikithi. I-Automation USU-Soft nayo ikulungele ukukusiza ngalokhu, ikusiza ukuthi ungaphuthelwa yisikhathi esinqunyiwe, ngesikhathi esifanele ikwazisa ngokuqedwa komsebenzi ukuze ungapheli isikhathi. Ngale ndlela ukwazi ukugcina isithombe sakho esihle futhi amaklayenti akho azongezwa. Uhlelo lwe-USU Software luyakwazi ukwenza umsebenzi wabasebenzi ube lula futhi ube lula, uhlelo lokusebenza luyathuthukiswa njalo, luhlanganisa ubuchwepheshe bamuva, futhi lwenzelwe inkampani ngayinye. Ngeplatifomu, ungacubungula kokubili imibhalo yangaphakathi nangaphandle evela kumakhasimende, lokhu kwenziwa ukuhlanganiswa nesayithi. Ukuhamba kwedatha ngokushesha, futhi kusebenza kusheshiswe kakhulu, izibalo ezigciniwe, ezingaba lula ukuqapha ukusebenza kwabasebenzi nenhlangano iyonke. I-USU-Soft inezinye izinzuzo ezisobala ngenxa yalolu hlelo, kungenzeka ukwenza ukubalwa okuphelele kwezezimali, ezentengiso, ezabasebenzi, imisebenzi yokuphatha, kanye nokwenza ucwaningo olunzulu ngemibiko yolwazi. Ngomthombo, ungasebenza ngemishini ehlukahlukene, izinhlelo, izithunywa nolunye ulwazi. Wonke amakhasimende abalulekile kithina, ungahlola uhlelo lusebenza ngokulanda inguqulo yesilingo ye-USU Software. Noma yisiphi isigaba sokusebenza esinamadokhumenti alula, asebenzayo, futhi asezingeni eliphakeme. Phatha inhlangano yakho kahle ngeplatifomu ehlakaniphile evela ku-USU Software.
Uhlelo lwe-USU Software accounting lwenza inqubo yokubalwa kwezicelo zomsebenzisi ibe lula futhi isebenze kahle. Ngosizo lwe-USU-Soft, ukwazile ukusebenzela amaklayenti kahle futhi ubanikeze ukwesekwa kolwazi. Usebenzisa i-USU Software, ungaphatha kahle izigaba zokuthengiselana futhi unikeze ukusekelwa komsebenzisi.
Zonke izinhlelo zokubalwa kwezimali, izinyathelo zokubalwa kwemali ze-oda ngalinye zingafakwa ohlelweni lokubalwa kwemali. Uhlelo lwe-accounting lisebenziseka kalula futhi luhlangana nobuchwepheshe bamuva. Uhlelo lungena kalula futhi ngokushesha idatha yokuqala emayelana namakhasimende akho noma izicelo zakho, mayelana nenhlangano, lokhu kungenziwa ngokungenisa idatha noma ngokufaka idatha ngesandla. Kumsebenzisi ngamunye, uyakwazi ukufaka inani lomsebenzi ohleliwe, ekugcineni, bhalisa izenzo zokubalwa kwemali ezenziwe.
Uhlelo lusebenza nawo wonke amaqembu womkhiqizo nezinsizakalo. Ngenxa yesistimu yokubalwa kwezimali, ungagcina uhlu olubanzi nolunemininingwane lwamasheya. Umkhiqizo ozenzakalelayo ungalungiswa ukuze izinkontileka, amafomu, neminye imibhalo igcwaliswe ngokuzenzekelayo.
Ukulawulwa kwemali engenayo nezindleko zenkampani kuyatholakala. Isoftware ibonisa izibalo zezicelo nezicelo ezigcwalisiwe, nganoma yisiphi isikhathi ungalandelela umlando wokuxhumana nomsebenzisi ngamunye. Ukuqapha ukubambisana nabahlinzeki kuyatholakala. Ku-software, uyakwazi ukugcina ukubalwa kwemali okuningiliziwe nokulawula. Ipulatifomu ihlangana nefoni. Ngenxa yesoftware, ungaphatha amagatsha nokuhlukaniswa kwesakhiwo. Usebenzisa isoftware, ungasetha ukuhlolwa kwekhwalithi yamasevisi ahlinzekiwe. Uhlelo lungalungiswa ukuze luhlanganiswe namatheminali wokukhokha. Wonke umsebenzisi uthanda ukwakheka okuhle nemisebenzi elula yesoftware. Ukuhlanganiswa ne-telegram bot kungenzeka. I-USU-Soft ihlala iguqukela ekuhlanganisweni nobuchwepheshe bamuva. I-USU-Soft iyithuluzi lesimanje elinemisebenzi ehlukahlukene yesoftware. Emakethe yezicelo yamanje, kunezinhlelo eziningi zezicelo zabasebenzisi be-accounting, ezifaka inani lezaphulelo kanye nokukhululeka, kepha iningi lazo likhubazekile endaweni ebanzi kakhulu futhi alinaki izingqinamba zenhlangano ethile. Abanye babo baphuthelwa ukusebenza okudingekayo, abanye banemisebenzi 'eyengeziwe' okungakhokhelwa kangcono ngayo, konke lokhu kudinga ukwakheka ngakunye kohlelo ngezidingo zenkampani. Nayi - uhlelo lwe-USU Software.